Ndị gọvanọ ndịda ọwụwa anyanwụ na ndị isi na-ekwusi ike na Ebube Agu maka nchebe
Ndị gọvanọ Ndịda Ọwụwa Anyanwụ guzobere usoro iwu Ebube Agu na Sọnde.
Ha gwara ndị ọka iwu ukwu nke steeti ise ahụ ka ha depụta iwu ga-enye ndị otu a ikike iwu.
"A dọrọ ndị ọka iwu izugbe na ndị kọmishọna maka ikpe nkwụmọtọ nke steeti ndịda Ọwụwa Anyanwụ ka ha na Kọmitii Nchedo Na-arụkọ Ọrụ rụpụta mmegharị iwu nke steeti iji gosipụta uwe Ebube Agu dị ugbu a," ka ha kwuru.
N’abalị iri na otu nke Eprel, ndị gọvanọ weputara Ebube Agu (tiger glory) iji dozie nsogbu na-arị elu na mpaghara ahụ.
Ọtụtụ ndị uwe ojii ezubere iche ma gbuo ndị isi na steeti ndịda ọwụwa anyanwụ n’ime ọnwa atọ gara aga.
Ndị gọvanọ ahụ, bụ ndị zutere na Enugu na Sọnde, kwetara na usoro na usoro arụmọrụ nke Board Advisory maka Ebube Agu.
Mkpebi a na-akwụsị ndị na-ekewapụ iche n ’Indigenous People of Biafra (IPOB) na-akpọ ka Ebube Agu pụọ.
Ndị gọvanọ katọrọ mwakpo ahụ Gọvanọ Imo Steeti Hope UzodinmaObodo obibi na Saturday.
Ndị oji egbe ahụ gbagburu ndị nche abụọ na nkwụsị Oguta tupu ha egbuo ndị nche isii n'ụlọ Uzodimma ma gbaa ya ọkụ. Ndi uwe ojii ekwuola na mmadụ atọ anwụọla.
Ọ bịara mgbe e gbusịrị otu nwoke naanị aha ya bụ Ikonso, onye e kwuru na ọ bụ onye isi otu ndị akpọrọ Indigenous People of Biafra's Eastern Security Network (ESN) (IPOB).
E boro Ikonso ebubo ịhazi mwakpo a Eprel 5 wakporo isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii Imo na ndị Owerri ebe mgbazi, nke butere ọkụ ọgbụgba 38 na ịtọhapụ ndị mkpọrọ 1,844.
Na a mara ọkwa na-agụ site ya onyeisi oche na Gọvanọ nke Ebonyi Steeti David Umahi, otu ndị gọvanọ dị na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ kwuru na Ebube Agu ga-eso ndị ọrụ nchekwa emekọ ihe.
“Nzukọ ahụ katọrọ kpamkpam mwakpo a na-ebuso obodo nke Gọvanọ Uzodimma na akụrụngwa ndị ọzọ nke steeti.
"Anyị nwere ọmịiko n'ebe ọ nọ ma gbaa Gọọmentị Federal ume ijide ma kpee ndị omempụ ahụ ikpe," ndị gọvanọ ahụ kwuru.
Lọ Nzukọ ahụ nyere Prof. George Obiozor, Onye isi ala nke Ohanaeze Ndigbo iwu, ka o guzobe Kọmitii Udo na Ndozi na Kọmitii Atụmatụ na Ọdịmma n'ime ụbọchị 10.
Iwu ndị kọmitii ahụ bụ "itinye ndị anyị maka udo na nchekwa nke ndị anyị na ndị njem nleta," yana "itinye aka na ichebe ndị anyị, ọkachasị ndị a na-emegbu."
Ndị gọvanọ ahụ kwughachiri oku ha kpọrọ ndị uwe ojii steeti na ndozi mba niile.
“Nzukọ a na-akwado mgbanwe, nguzobe nke ndị uwe ojii steeti, na ihe ndị ọzọ metụtara mba ndị e kwuru na nzukọ ndị isi nke National Council Council (NEC) n’izu gara aga.
"E guzobela kọmitii iji mepụta usoro kwesịrị ekwesị ma chee ha na NEC na nzukọ ha na-esote," ndị gọvanọ ahụ kwuru.
Nzukọ ahụ gosikwara mmachi mpaghara a machibidoro ịta ahịhịa.
“Ndị ndu ndịda Ọwụwa Anyanwụ Ọwụwa Anyanwụ na-ekwusi ike na ha kwadoro iwu obodo anyị na-amachibido ịta ahịhịa na ndịda ọwụwa anyanwụ, ha na-agba ndị ọrụ nchekwa na ndị na-amụ anya obodo ume ka ha mezuo iwu ahụ na mpaghara ahụ.
Ha kwuru na "ndị gọvanọ Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Ebe Ọwụwa Anyanwụ kwetara ịmebata mmemme ikike ntorobịa dị iche iche #ENDSARS ozugbo enwere ike na steeti ndịda Ọwụwa Anyanwụ," ka ha kwuru.
Ndị gọvanọ Enugwu na Abia bịakwara, dịka ndị gọvanọ Anambara na Imo, ndị ndị nnọchi anya ha jere ozi.
Ọkammụta Obiozor, Igwe Alfred Achebe, Obi nke Onitsha, Rev. Emmanuel Chukwuma, Achịbishọp nke Enugwu Ecclesiastical, Enugwu Anglịkan, onye bụbu gọvanọ ochie Steeti Anambra Chief Jim Nwobodo, na ndị okenye steeti ahụ bụ Chief Emmanuel Iwuanyanwu so na ndị bịara ya.
Gọvanọ: Ndị na-eme ihe ike enweghị ikike ime mpụ.
Mwakpo a wakporo ụlọ Uzodimma bụ nke ndị gọvanọ Nigeria Governors 'Forum (NGF) katọrọ.
Na nkwupụta, onye isi oche ya na Gọvanọ nke Ekiti State, Kayode Fayemi, gbara ndị Nigeria ume ka ha nyere ndị ọrụ nchekwa aka ịlụso nsogbu nchebe nke mba ahụ na-arị elu.
"Gotù Na-ahụ Maka Ndị Gọvanọ nke Nigeria na-egosipụta ọmịiko dị ukwuu nye gọvanọ Uzodinma na ndị niile merụrụ ahụ, merụọ ahụ, ma ọ bụ gbuo," ka nkwupụta ahụ na-agụ.
“Ihe ikpo okwu a na-agba ezigbo ụmụ amaala niile ume ka ha na gọọmentị na ndị ọrụ nchekwa obodo na-arụkọ ọrụ ọnụ iji wee mebe obodo anyị, ịdị ọcha ma kwụsie ike maka ụmụ amaala anyị.
“Ndị kwesịrị mpụ a aghaghị ịghọta na ọ bụghị nanị ha nwere mmegbu. Nke a bụ akpachapụghị anya na enweghị oke mpụ na oke oke.
Nkwupụta ahụ kwuru, "Aka niile ga-adịrịrịrị iji jide ndị kpara arụ a, ka ha na-anọchi anya otu obere ndị otu na-anwa itinye ndụ ụlọọrụ nke mba anyị hụrụ n'anya nsogbu."
Ndị bi na-agba ọsọ.
Mgbe mwakpo a wakporo ụlọ gọvanọ ahụ, ndị bi na Awo Omamma Community dị na Oru East Council Area nke Imo Steeti agbapụla n'ụlọ ha.
Egwu dị ka ndị nwudoro na-ejide n'etiti ọnụnọ nchekwa siri ike, dịka a na-ekwu na ndị oji egbe yiri egwu ịlaghachi.
Otu onye ikwu onye gọvanọ ahụ rịọrọ ka a ghara ịmata onye ọ bụ, kwuru, sị, “Mgbe m nụrụ ụda égbè dị ike n'oge mwakpo a na-awakpo ụlọ gọvanọ, adara m ahụ́.
“Mgbe ihe na-aga ịnwụ, abịara m soro otu ndị ikwu m na-ala, mgbe ndị uwe ojii gbara anyị gburugburu.
“Ha nara ekwe ntị anyị niile wee gwa anyị na mwakpo a busoro ụlọ gọvanọ ahụ bụ mbido, na ha ga-alọghachite.
“Ndị obodo na-apụ n’ụlọ ha ma kwaga n’obodo ndị dị nso. Nke a bụ n'ihi na ụfọdụ n'ime anyị enweghị ntụkwasị obi na ndị agha a. "
Ohanaeze katọrọ mwakpo a.
Ohanaeze Ndigbo katọrọ mwakpo ahụ, dị ka nkwupụta si n'ọnụ onye na-ekwuchitere Alex Ogbonna.
“Nke a bụ ihe a na-enweghị mgbagha, ọ ga-akarịkwara Ndigbo niile ebe niile. Anyi aghaghi imegide ebe nsọ anyi dika ndi Igbo, n’agbanyeghi ihe kpatara ya. Ihe a bu mkpasu iwe na ihe ohuru bu ihe adighi n’ekwe ndi Igbo ala.
N'ihi nke a, Onye isi ala dọrọ ndị ntorobịa Igbo aka na ntị ka a ghara iji ha ma ọ bụ iwepụta onwe ha maka ndị agha ahụ n'ime na mpụga ala Igbo bụ ndị chọrọ ime ka ndịda Ọwụwa Anyanwụ ghọọ ebe ihe nkiri nke ọgba aghara, esemokwu, na ime ihe ike.
Akpuelu Azunna, onye isi oche nke Ohanaeze Ndigbo n’Imo steeti, kwuru na ọ bụbeghị aka ikwu onye kpatara mwakpo a.
Ọ sị, "Mwakpo a bụ ihe nleda anya," ka ọ na-arịọ ndị nche ka ha nyochakwuo.
Chief Mike Ahamba (SAN), a Onye isi na Nigeria (SAN), agwala Ndigbo ka ha ghara ịnabata ọgba aghara n’obodo a.
“Mwakpo ahụ dị mwute ma bụrụ ihe jọgburu onwe ya, anyị ekwesịghịkwa ikwe ka ọgba aghara gbanye mkpọrọgwụ n'etiti anyị.
“Ọgba aghara bụ oge dị ize ndụ n’oge gara aga nke nwere ike ịda n’oge ọ bụla na ebe ọ bụla. O kwuru, sị, "Echere m na ọ bụ n'ezie ezigbo mma."
Chief Goddy Uwazuruik, onye isi oche nke Aka Ikenga, gosipụtara ụjọ na mwakpo ahụ.
Ọ sịrị, "Gọọmentị etiti kwesịrị ịgbalị chọpụta onye na-eme ogbunigwe ahụ na-atụkwa ụjọ na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ ,wa.
IPOB: ogbugbu nke ndị nnọchi anya anyị na-agbawa obi
Ọnụ na-ekwuru IPOB, Emma Strong, wepụtara nkwupụta na-akatọ ogbugbu ndị otu ya n’Imo.
Akwụkwọ ozi ahụ kwuru na ndị gburu ogbugbu ndị ọchịagha ya 'ga-akwụ ụgwọ' ha.
Dabere na Strong, onye kwukwara okwu na Channels, ndị agha enweghị ego iji bata ebe obibi ya, Ikonso zoro ezo ka ọ na-eleta obodo ya.
“Ọ bụ akụkọ ụgha. Ndị agha Naijiria enweghị ego iji banye na ogige IPOB. IPOB na ESN ka na-arụ ọrụ. Ọ sịrị, “Chineke nọnyeere anyị.”
O kwukwara na agbanweela ọchịagha ahụ e gburu.
“Ogbugbu nke obi tara mmiri nke ndi Biafra n’emeghi ihe ojoo n’iche obodo anyi na obodo anyi n’aka ndi na eyi ọha egwu ndị na-azụ atụrụ Ikpu dika ndi na-azu ehi na-egbu mgbu nke ukwuu, ”ka Powerful kwuru na nkwupụta ahụ.
"Hope Uzodinma, onye isi ụlọ ikpe ukwu nke Imo Steeti, na ndị niile nwere aka na ajọ ihe a ga-akwụ ụgwọ nke ukwuu - Hope Uzodinma na ndị ọrụ nchekwa Naịjirịa na-atụ ụjọ nke na-enweghị ike ibuso ndị na-eyi ọha egwu agha kama naanị imegharị ahụ ha mgbe ha hụrụ ndị na-eme Biafra."
Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Nigeria - Agha na-enweghị njedebe April 28, 2021
Ndị torola eto dịka Buhari na Tinubu emechuola ndị Naịjirịa aka: Yahaya Bello Nwere ike 6, 2021
El-Rufai na-ebo Ganduje ebubo inye ndị isi NLC ego inye nsogbu na Kaduna Nwere ike 22, 2021
Tags:steeti anambra, ebonyi, ebube, emmanuel iwuanyanwu, fayemi, ndị na-azụ atụrụ, hope uzodinma, ike, imo steeti governor, ọnọdụb, iwuanyanwu, jim nwobodo, kayode fayemi, obi nke onitsha, ogbonna, oguta, ohanaeze ndigbo, Nkwerre, onye isi ala nigeria, ndị uwe ojii steeti, inye ike ntorobịa